काठमाण्डौपछि वीरगञ्ज पुग्यो भोजमाण्डूको सेवा Bizshala -
काठमाण्डौ । डेढ वर्षदेखि काठमाण्डौंलाई केन्द्रीत गरी संचालित अनलाइन फूड डेलिभरी सेवा भोजमाण्डूले आफ्नो सेवा वीरगञ्जमा समेत विस्तार हुने भएको छ ।
भोजमाण्डू फूड प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल यादवका अनुसार विजयादशमीको शुभ अवसर पारेर भोजमाण्डूको सेवा असोज २९ गतेबाट वीरगञ्जमा समेत सुरु हुनेछ । 'वीरगञ्ज केन्द्रीत रहेर हामीले बजारीकरणको सबै काम सकिसकेका छौं ।' यादवले भने-'वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा अर्डर आएको २५ देखि ४५ मिनेटभित्र डेलिभरी गर्ने मुख्य योजना रहेको छ र तातो र छिटो खाना, खाजा पुर्याउन हामी कटिबद्ध छौं ।'
भोजमाण्डूले पेमेन्टका लागि खल्ती एपसँग सहकार्य गरेको छ । खल्तीबाट पेमेन्ट गर्नेले ५० रुपैयाँ क्यासब्याक र १० प्रतिशतसम्म छुटको अफर समेत भोजमाण्डूले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, भोजमाण्डू एप डाउनलोन गर्दा समेत रु. ५० अतिरिक्त लाभ पाइन सकिनेछ ।
bhojmandu sunil yadav
फेसबुकले हटायो ‘फेसियल रिकोग्निसन’ फिचर, यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । फेसबुकले फोटो र भिडियोमा मानिसको अनुहार पहिचान गर्ने...
काठमाण्डौ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सेलकम प्रालिले तिहारको...
काठमाण्डौ । फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम परिवर्तन गरी ‘मेटा’...
फेसबुक Vs एप्पल : एप्पलको विज्ञापन रोक्ने फिचरले फेसबुकलाई भारी
काठमाण्डौ । एप्पलको हालै लन्च भएको आपरेटिङ सिस्टम आईओएस १४ अपडेटका...
वेब ३.० भनेको के हो ? यसको आवश्यकता किन ?
काठमाण्डौ । इन्टरनेटलाई वर्तमान आधुनिक जीवनको एउटा महत्वपूर्ण...